ANOR any Betsiaka: ho fampanarahan-dalàna ireo mpitrandraka volamena | NewsMada
ANOR any Betsiaka: ho fampanarahan-dalàna ireo mpitrandraka volamena
Par Taratra sur 18/08/2018
Napetraka ao amin’ny kaominina Betsiaka, distrikan’Ambilobe ny Anor (Agence nationale de l’or), rafitra iray ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany misahana manokana momba ny volamena. Nitokana izany ny filoha Rajaonarimampianina, ny 16 aogositra teo. Raha ny tombantombana, tsy latsaky ny 25.000 ireo mpitrandraka volamena ao amin’io kaominina io, miampy ireo mpividy volemana, miasa ivelan’ny ara-dalàna ny ampahany be indrindra, amin’izy ireo.
Betsaka, noho izany, ny fatiantoka ho an’ny firenena manomboka any amin’ny kaominina, ny distrika, ny faritra. Koa eo ny Anor, rafitra ho fampanarahan-dalàna ireo mpitrandraka, miara-miasa amin’ny Bureau de l’administration minière (Bam) sy ny Direction police des mines (DPM). Manampy ireo rafitra ireo ny Conseil national des mines (CNM), mpanelanelana eo amin’ny mpitrandraka sy ny fanjakana. « Ho fanampiana ny mponina izao ary ho fanentanana azy ireo hanara-dalàna, hahitan’ny kaominina tombontsoa », hoy ny tale jeneralin’ny Anor, Ranoroharisoa Tiavina.
Antoky ny fampandrosoana iray lehibe ho an’i Betsiaka aloha, voalohany indrindra, ny fisian’ny volamena ao aminy, ary tsy tokony horaisin’ireo miasa amin’ity lalam-pihariana ity ho sakana ho azy ireo ny fisian’ny Anor, ny Bam sy ny DPM.
Mety tsy mampazoto ny mponina koa anefa ny fanaovana taratasy be loatra any amin’ny biraom-panjakana, ary avy amin’ireny ny mitarika kolikoly isan-karazany, koa aleon’ny olona « mandeha fotsiny amin’izao ». Tokony ho lanjalanjaina ihany ity fanaovana taratasy be loatra any amin’ny biraom-panjakana ity.